Edena iray hafa dia tsy ampoizina mihoatra ny sora-baventy toa RPG | Androidsis
Mazava fa raha tsy omentsika faharetana kely izany, mety tsy hahita lalao toa an'i Edena hafa isika. Nandritra ny minitra voalohany nilalaovany dia natombony tamina tantara iray ianao izay saika hitomanianao ny hahatongavany izao hijerena ny tena dikan'ilay hetsika.
Saingy tsy toy izany, ary mahatonga anao hiandry hahalalanao fa misy anay voalohany indrindra sy ny RPG «« Final Fantasy »» RPG, izay nahagaga anay fa mamindra ny maherifonay izahay hahita ny sarintany izay manana foto-kevitra mihoatra ny manokana. Fantaro ny ambin'ity RPG ity izay iray amin'ireo tena izy.
1 RPG amin'ny fomba mahazatra indrindra mba hamosaviana
2 Eden iray hafa sy ny fampatsiahivana ny lalao RPG hafa
3 Tsy manana espaniola izy
RPG amin'ny fomba mahazatra indrindra mba hamosaviana
Raha lazaintsika fa RPG izy, dia satria leo kely an'ireo buburidge ireo sy ireo izay manana ady mandeha ho azy isika. Edena hafa eIzy io dia misy antsipirian'ny kalitao ahoana izany tontolo izay manokatra amin'ny fomba hafa mihitsy. Izany hoe, mijery ny tenantsika amin'ny fomba fijeriny isika, fa afaka "miakatra" amin'ny fotoana rehetra mba hisongadinana ny fiaviany, ary mandritra izany mandritra ny sari-tany dia ho hitantsika eo an-tampon'ny efijery ka ho very .
Ny Eden iray hafa dia momba ity foto-kevitra ity ho toy ny RPG izay manana tantara izay atomboka aminy miroso amin'ny dia mandritra ny fotoana sy habakabaka ary amin'izany dia tokony hamonjy ny hoavintsika very isika. Noho izany dia miditra amin'ny lalao izay manana fomba tena manga, feno loko ary manana endri-tsoratra tsara endrika kokoa.
Ary na dia manomboka miadana kelyMety efa zatra an'io porridge "spidic" io isika, mametraka anao tanteraka amin'ny tantara. Saingy mazava ho azy, mitady hetsika vitsivitsy isika, koa rehefa nanaraka ny famantarana rehetra tao an-tanàna nisy anay izahay dia hitantsika fa ny ady sy ny fomba niterahany dia amin'ny endrika Final Fantasy madio.
Eden iray hafa sy ny fampatsiahivana ny lalao RPG hafa
Tsy ny Final Fantasy ihany, fa mampatsiahy ny Chrono Trigger. Raha ny marina, rehefa mandao ny tanàna isika, amin'ny iray amin'ireny, dia handeha amin'ny efijery mitovy amin'ilay ady ateraky ny toerana misy antsika (tsy misy efijery fandefasana) ary hanomboka ny ady mifototra amin'ny fihodinana.
Hanana ny maherifonay hiady isika manohitra an'io andiana dragona noana mosary io iza no hiandry ny anjarany hanao valin-kafatra. Eto no misy ny zavatra fantatra rehetra amin'ireto lalao ireto, ka ho ao an-trano ianao hanafoana ny fahavalo ary hiandry ny hafa ho avy miaraka amin'ny majika, ody ary fanasitranana.
Tokony hametraka ny lantom-peo amin'ny feonkira izay afaka mampiditra antsika amin'ny tantara amin'ny fomba tsara indrindra isika amin'ny fotoana rehetra. Feo valizy, ka ny ny feon-kira dia lasa epic ary tena folk. Ho an'ny ambiny, dia hahita tantara iray nosoratan'i Mitsuda Yasunori sy votoaty marobe miandry ho hita ianao.
Tsy manana espaniola izy
Ary raha toa ka tonga lafatra ny zava-drehetra dia misy lesoka vetivety, Tsy amin'ny Espaniôla fa amin'ny Anglisy. Ka raha tsy mifampiraharaha amin'ny Anglo-Saxon ianao dia tsy hahita ilay tantara manana ny azy. Na izany na tsy izany, azo lalaovina izy io, satria hanana famantarana ny toerana halehantsika sy izay hatao isika amin'ny fotoana maro.
Amin'ny lafiny teknika dia lalao iray ahafahan'ny antsipiriany sasany ankasitrahana. Ny fomba ahafahantsika mivezivezy manerana an'izao tontolo izao dia tena manokana ary tsy fahita mihitsy. Ny endri-tsoratra, ny fanafihana, ny fahavalo ary ny tontolo iainana dia miaraka amin'ireo singa hita maso ilaina hamoronana ny tontolon'izy ireo. Ary ny feon-kira dia milaza fotsiny hoe hooks.
Ka miaraka izahay Eden iray hafa ho RPG tena manokana izay efa anananao amin'ny findainao Android maimaim-poana. Hiandry ny fahafahan'izy ireo mandefa azy amin'ny teny Espaniôla izahay ary amin'izany dia hankafy ny tantara miandry antsika. Avelanay miaraka amin'ny Fury Survivor ianao izany, na dia mahatratra zombie aza izy io, dia afaka mandentika anao ao anatin'ny tontolony manokana toa ny nataon'ny Another Eden.
Ahoana ny fomba fivezivezanao manerana an'izao tontolo izao
Ny zava-drehetra dia novokarina tsy nisy ny pikantsary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Eden iray hafa dia RPG amin'ny endrika mahazatra indrindra izay tsy mandiso fanantenana
Samsung dia manokatra fivarotana fampiharana ho an'i Bixby